Munaasibad Si Balaadhan Loo Agaasimay Oo Urur Siyaasadeedka Wadani Xafiis Kaga Furtay Xarunta Sool Ee Laascaanood – Araweelo News Network (Archive)
Laascaanood(ANN) Munaasibad si weyn loo abaabulay oo ujeedadeedu ahayd xafiis cusub oo Urur siyaasadeedka WADANI ka furtay magaalada Laascaanood ayaa shalay lagu qabtay Hotel Xamdi oo ku yaala Magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, munaasibadaa oo ay
goob joog ka ahaayeen maamulka heer gobol ee urur siyaasadeedka Wadani.
Xafladan loo sameeyey furitaanka xafiisyada ururkaasi ku yeelan doono gobolka Sool ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiinta maamulka urur siyaasadeedka WADANI ee gobolka Sool, taageerayaasha ururkaas ee gobolka , waxgarad aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan.
waxaa munaasibaadaasi dadkii ka hadlay ka mid ahaa nin lagu magcaabo Shiine oo ka mid ah aasaasayaasha urur siyaasadeedka WADANI, isla markaana ku hadlayay afka Gudoomiyaha xisbiga WADANI, waxaanu taageerayaasha ururkaas uga mahad celiyay sida ay uga soo qayb galeen kulankaa munaasibada furitaanka xafiiskooda.
Madasha munaasibadaas ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay Prof. Cabdiraxman oo ka mid ah golaha dhexe ee ururka WADANI isaga oo tacsi u diray dhamaan eheladii iyo asxaabtii uu geeriyooday Aadan Mire waqaf wuxuuna ku booriyay dadweyanha gobolka inay garab siiyaan ururka WADANI.
Marwo Carfi Jaamac Cali Gudoomiyaha urur siyaasadeedka WADANI ee gobolka Sool iyo masuuliyiin kale ayaa iyaguna khudbado dhaadheer oo ku aadan sida loola jaan qaadi lahaa xisbiga WADANI ka jeediyay halkaa.
Aligned Forces Collude Against Somaliland Gains, By, Farid Adenese